KAALIYAHA AMNIGA EE GOOBTA
TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH : 23 MAAY 2018
TAARIIKHDA SOO SAARISTA : 09 MAAY 2018
MAGACA JEGADA : KAALIYAHA AMNIGA EE GOOBTA
HEERKA : GL-4
QAYBTA : AMNIGA
MUDDADA HESHIISKA : HAL (01) SANO OO MUDDO GO’AN AH
LAMBARKA OGEYSIISKA BOOSKA BANNAAN : UNSOM/SEC/24/2018
Booskan waxaa la maalgelinayaa muddo hal sano oo hordhac ah kaliya, muddo kordhintana waxaa ay ku xirnaan doontaa sida loo ansixiyo miisaaniyadda. Booskan waa mid maxalli ah. Shakhsiga booskan codsanaya ayaa mas’uul ka ah dhammaan kharashka ka bixin doono si uu ula wareego booskan. Dhammaan dadka daneynaya shaqadan waxaa si weyn loogu boorrinayaa in ay codsiyadooda ku soo gudbiyaan hab online ah (internet) sida ugu dhaqsiyaha badan kaddib markii la xayeysiiyo shaqadan iyo ka hor inta aan la gaarin taariikhda kama dambeysta ah.
Qaabeynta hay’adda iyo Xiriirka Warbixinta
Booskan waa boos ka bannaan Xafiiska heer Gobol ee Howlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ee ku yaal Muqdisho. Kaaliyaha Amniga Goobta waxaa uu ka amar qaadan doonaa Madaxa Amniga. Ayada ama isaga waxaa uu taageeri doona uuna ka caawin doona Madaxa Amniga u qaabilsan Howlgalka Goobta xaqiijinta ammaanka iyo amniga xubnaha shaqaalaha QM, xarumaha iyo hantida QM ee ku yaal goobta howlgalka. Markii iyo haddii loo baahdo, Kaaliyaha Amniga Goobta waxaa uu gacan ka geysan doonaa tababarka iyo qorsheynta amniga ee howlgalka.
Waajibaadyada iyo Mas’uuliyadaha
Kaaliyaha Amniga ee Goobta waxaa uu mas’uul ka yahay waajibaadyada soo socda:
In uu adeegyo dhinaca taageero maamul oo guud fidiyo si uu ku caawiyo Saraakiisha Amniga in ay gutaan waajibaadyadooda ku aaddan xubnaha shaqaalaha iyo dadka ku tiirsan;
In uu gacan ka geysto uruurinta xogta iyo faafinta macluumaadka habboon ee la xiriira amniga kuwaas oo ay u baahan yihiin Madaxa Amniga, Ku Xigeenka Madaxa Amniga iyo Saraakiisha Amniga si ay u falanqeeyaan xaaladda amniga;
In uu ka caawiyo Saraakiisha Amniga ee ku sugan Laanta Howlgalka Amniga diyaaarinta dukumiintiyo la xiriira amniga oo ay ka mid yihiin Qorshaha Amni, SRM, warbixinnada joogtada ah, iyo warbixin kasta oo la xiriira howlaha waaxda ammaanka iyo sidoo kale in uu caawinaad dhinaca maamul uu u fidiyo qaybaha Laanta Howlgalka;
In uu diyaariyo waraaqaha uuna joogteeyo diiwaannada Tababarka Amniga ee la siiyo shaqaalaha amniga iyo kuwa jooga goobaha howlgalka;
In uu fidiyo taageero xilliga hirgelinta Qorshaha Amniga isaga oo ku fulinaya amarka Madaxa Amniga;
In uu gacan ka geysto dib u eegista shuruudaha saadka iyo tallaabooyinka kale ee la xiriira ee looga baahan yahay diyaarinta koorsooyinka tababarrada, dhoolatuska iyo howlaha kale ee la xiriira amniga;
In uu la socdo uuna fududeeyo hirgelinta siyaasadaha iyo habraacyada amniga isaga oo si dhow la kaashanayo kormeerayaasha qaybta howlgalka amniga iyo kuwo kale;
In uu dhiso uuna joogteeyo xiriir dhow oo uu la yeelanayo hay’adaha amniga ee dalka uuna isku xiro xirfadleyaasha amniga iyo adeegyada dalka, si looga wada hadlo dhibaatooyinka jiri karaa isla markana loo qorsheeyo qaababka lagu xallin karo;
In uu gacan ka geysto abaabulka iyo qabashada howlaha wacyigelinta iyo u diyaargarowga amniga, isla markana uu tababar ku aaddan amniga u fidiyo xubnaha shaqaalaha ee cusub iyo sidoo kale in uu qabto kulamo la xiriira amniga, sida loogu baahdo;
In uu gacan ka geysto diyaarinta koorsooyinka Tababarrada ees soo Dhaweynta, iyo bandhigyada iyo dukumeentiyada la xiriira;
Markii iyo haddii loo baahdo, in uu bandhigyada amniga uu u diyaariyo Madaxa Amniga iyo Saraakiisha Amniga ee ka mid ah laamaha kale;
In uu isku dubo cutubyada uuna si joogta uula xiriiro xubnaha kooxda gudaha ee ku sugan Xarumaha dhexe iyo kuwa jooga goobaha howlgallada.
In uu qabto howlaha kale ee la xiriira maamulka, sida loo baahdo (sida barnaamijka howlaha safarka, qabanqaabinta iyo isku duwidda siminaarrada, kulamada iyo turjumaaadda).
In uu qabto waajibadyada kale ee uu ku amro Madaxa Amniga ama qofka uu u xilsaaray.
Xilkasnimada: In si qoto dheer uu u fahamsan yahay arrimaha siyaasadeed, mid bulsho iyo mid dhaqaale ee Soomaaliya gaar ahaanna Muqdisho. In uu ogaan karo uuna falanqeyn karo arrin la xiriira siyaasad, qabiil ama dhaqaale ee suurtagelin karaa kacdoon shacab. In la hubo in uu dhisi karo isla markana uu xiriir joogta ah la sameyn karo daneeyayaasha dhinaca maamulka iyo bulshaduba. In uu awood u leeyahay in uu sameeyo xog uruurin. In uu ku faano shaqadiisa iyo guulaha; in uu muujiyo xilkasnimo iyo in uu aqoon buuxda u leeyahay shaqada; In uu yahay qof feejigan oo ku wanaagsan ka soo bixidda ballanqaadyada, in uu dhowro muddada kama dambeysta ah uuna ku guuleysto natiijooyinka; halkii uu dhiiriggelin ka heli lahaa arrimo shaksiyeed oo asaga u khaas ah in uu dhiiriggelin ka helo arrimo ku saabsan shaqo; in uu dhabar-adeyg muujiyo markii uu la kulmo dhibaatooyin ama caqabado; In uu noqdo qof deggan markii ay asiibto xaalado walaac ku abuura; in uu isa saaro mas’uuliyad in uu tixgeliyo arrimaha jinsiga uuna xaqiijiyo sinnaanta dhinaca ka qayb-galinta dumarka iyo ragga ee dhammaan shaqooyinka.
Waxbarashada: Shahaado dugsi sare ama wax u dhigma ayaa loo baahan yahay. Tababar/koorsooyin khaas ah ee dhinaca amniga waa muhiim.
Khibrad: Ugu yaraan saddex (03) sano oo uu qofka kororsaday khibrad habboon ee dhinaca Amniga ama shaqo la mid ah sida khibrad boolisnimo ama militari.
Languages: Luuqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ah luuqadaha shaqada ee Qarammada Midoobay. Booskan waxaa loo baahan yahay qof fasIIx ku ah hadalka iyo qoraalka luuqadaha Ingiriiska iyo Af-Soomaaliga. Aqoonta luuqad kale ee Qaramada Midoobay waa faa’iido dheeraad ah.
Habka Qiimeynta: Qiimaynta dadka u qalma booskan ayaa waxaa ka mid noqon karaa layli qiimeyn ah kaas oo ay daba socon doonto warreysi ku saabsan kartida.
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose iyaga oo lambarka ogeysiiska shaqada bannaan iyo jegada shaqada ku qorayo qaybta mowduuca markii la joogo taariikhda kama dambeysta ah ama ka hor. Foomka P11 waxaad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee 23, Maay 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CV) lama aqbali doono. Kaliya dadka la soo dhejiyo ayaa lala soo xiriiri doonaa.
Fadlan ku lifaaq nuqulka foomka P11, Shahaaddada Dugsiga Sare, Baasaboor ama Teesaraha Aqoonsiga. Kuwani waa loo baahan yahay, waxaa ayna qayb ka yihiin codsigaaga isla markana loogu talagalay in lagu qiimeeyo in aad u qalantid. Fadlan ogow in Shahaadooyinka CID-da iyo NISA loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.